Ronaldo – ‘Neymar Wuxuu Noqonayaa Xidiga ugu fiican Aduunka’
HomeWararka MaantaRonaldo – ‘Neymar Wuxuu Noqonayaa Xidiga ugu fiican Aduunka’
Cadalool-(Arbaca -May-7 ) –Cristiano Ronaldo ayaa aaminsan in laacibka kooxda Barcelona ee Neymar uu leeyahay awoodii uu ku noqon lahaa xidiga ugu fiican caalamka.
Kooxda reer Catalans ayaa ciyaaryahankan 22 jirka ah kagala soo wareegtay Santos qiime lacageed oo dhan €87.2 million , waxaanu u dhaliyey 9 gool oo horyaalka ah isla markaana waxa uu caawiye ka noqday 8 gool , 25 kii kulan ee ugu horeysay ee uu kooxda u saftay.
In kastoo ficiltan xaga tartanka ah oo weyni ka dhaxeeyo kooxaha ay u kala ciyaaraan , hadana Ronaldo , wuxuu aaminsan yahay in wiilkan reer Brazil uu meesha ka saari doono xidigaha hadda aduunka hormuudka ka ah dhinaca kubada cagta.
“Waxaan u arkaa Neymar laacib weyn,” ayuu yidhi Ronaldo oo la hadlaya Telefishanka SporTV News. “Waxay ila tahay wakhti aan fogayn ayuu la soo baxay xirfadan ciyaaryahanimo waxaanu cadeeyey inuu yahay laacib kubada mustaqbal ifaya ku leh.
“La qabsigiisii Barcelona ma fiicnayn, waxaa ka hor yimid woxogaa caqabado ah bilowgiiba, laakiin shaki igagama jiro inay ku duugan tahay xirfadii uu kaga mid noqon lahaa xidigaha ugu wanaagsan dunida mustaqbalka dhaw ama aan idhaahdoba xidiga ugu fiican aduunka .”
Isku Aadka Copa Del Rey Oo La Shaaciyey Iyo Kooxaha Ugu Waaweyn Oo Ay Suurtogal Tahay In Ay Isku Muruxsadaan
“Klopp Waa Nin Waalan” – McClean
Riquelme Oo Ku Shaaciyey In Uu Ciyaaraha Ka Fadhiistay